downloads 4 516
n'ihi na Prepar3D ụdị dakọtara pịa ebe a
Nke a bụ a zuru ezu rendition nke Fort Wayne International Airport, Indiana, USA. The ọdụ bụ a mpaghara ọdụ na-eje ozi Northeast Indiana na bụkwa n'ụlọ nke USAF 122nd Agha nku Indiana Ang.
Ọdụ ụgbọ mbụ aha ya bụ "Baer Field" dị ka a World War II agha isi. N'oge Agha Ụwa nke Abụọ karịa 100,000 agha na-eje ozi na ọdụ.
Ọdụ ụgbọ agbanweela eme ihe ike ike ndozi plan nke gụnyere mmụba nke ọnụ na-adọba ụgbọala ebe, upgrades na runways, na ihe e kere eke nke ihe Air Trade Center na-akwalite mmepe na Northeast Indiana. Dị ka a n'ihi nke FWACAA si nkwa ahịa ọrụ, Fort Wayne International Airport ghọtara site USA Today ka otu n'ime ndị friendliest ọdụ ụgbọelu na mba.
Ọdụ ụgbọ ejiri banyere 35,000 landings / iri-offs kwa afo. Ọtụtụ n'ime ndị isi US ụgbọ elu ma ọ bụ ha feeders na-eje ozi na ọdụ na ọtụtụ na-udia ha n'ógbè nlekọta ọrụ maka gaa n'ihu njikọ. Allegiant na-eje ozi ezumike ahịa na nta ụzọ gasị. Ọdụ ụgbọ nwere ịrịba ọnụnọ nke ibu-ebu FedEx na gbasie.
The abụọ nnukwu FBOs na-enwe na ebe ndị mara mma. The ọhụrụ Fort Wayne Aero Center bụ na center mgbe Atlantic Aviation dị n'ebe ugwu ọdịda anyanwụ nke isi ọnụ.
Odude n'akụkụ aka Fort Wayne International Airport bụ 122nd Agha nku nke Indiana Air National Nche. The 122nd ijiji na A-10 thunderbolt II si ha isi na Fort Wayne, Indiana. Ị pụrụ ịhụ na ha na ebe ndị mara mma.